IO Inopindirana inochengeta kodzero kune HITMAN uye inozvimiririra | Linux Vakapindwa muropa
Nhau dzakanaka dzevateveri veHITMAN Linux. IO Inopindirana yasimbisa kuti yakwanisa kuchengetedza iyo copyright kune yakakurumbira vhidhiyo mutambo uye kuti izvozvi yave yakazara yakazvimiririra yekuvandudza studio. Izvi zvakasimbiswa zviri pamutemo uye zvakaitwa pachena mushure mekuburitswa kwenhau. Idzi inhau hombe dzenyika yeLinux, kwete chete nekuda kweiyo HITMAN zita pachayo, asi nekuda kwekuva studio yakazvimirira, uye netarisiro kuti vacharamba vachishanda neFeral Interactive, yakazvipira kuunza mamwe mazita kuLinux.
En chiziviso unogona kuverenga «Naizvozvo ndinodada kuzivisa nhasi kuti IOI ikozvino zviri pamutemo yakazvimiririra studio. Isu takabudirira kupedza kutaurirana ne Square Enix uye takabvumirana nekutenga manejimendi. Chaizvoizvo, isu tichachengetedza kodzero dzese dzehungwaru dzeHITMAN. ». Izvo zvakanaka kune IOI, sezvo paive nenguva yekudzikisira uye kusava nechokwadi paParai Enix, saka ikozvino nekuzvimiririra kubva pairi, ivo vanokwanisa kuve nerusununguko rwakawanda pasina kubviswa kwemari kwevagadziri ava.
IOI zvirokwazvo ndichatanga gadzira mitambo yakanaka sekujaira kwedu, uye kana vakasvika kuLinux, zvino zvirinani pane zvirinani. Muenzaniso ndeye HITMAN ane mukurumbira watakatotaura nezvake pane dzimwe nguva muiyi blog uye kuti iwe unogona kunakidzwa paLinux sezvaunoziva. Tinofanira kutora nhau nenhanho, nekuti tarisiro yese inogona kushanduka ikava nhau dzakaipa sezvo Square Enix iri yeLinux-inoshamwaridzika, uye vamwe havana chokwadi chekuti IOI icharamba ichive. Ndinovimba izvi zvakashata hazvizadzikiswe.
Izvo zvine chokwadi ndechekuti kunyangwe wakatora nhanho hombe mumunda we videogames yeLinux mumakore matatu apfuura, nezviuru zvemazita zvakagara zviripo uye imwe neimwe nguva yemhando iri nani, ichokwadi kuti kuchine zvisati zviri zvakawanda kwazvo studio huru uye vanogadzira vanotarisa kuLinux. Isu tinongoona kufarira kukuru uye vanoisa mimwe yemitambo yavo yemavhidhiyo papuratifomu yedu. Nekudaro, nhanho nhanho iwe unogona kuenda kure kwazvo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » IO Inopindirana inochengetedza kodzero kune HITMAN uye inozvimiririra